Oscar "Leonardo DiCaprio" wuxuu bilaabay inuu ku hadlayo codka Garik Kharlamov
Shabakadda bulshada ee Instagram, barnaamij cusub ayaa lagu helaa caan ah, oo u oggolaanaya in uu muuqaal ka muuqdo dabeecad kasta. Maanta muusiga caanka ah Garik Kharlamov ayaa go'aansaday inuu tijaabiyo sawirada.
Cayaartoyda caanka ah ee Comedy Club ayaa si dhow ula socota wararkii ugu dambeeyay ee Hollywood, waxayna u muuqataa, sida malaayiin taageerayaal kale oo Leonardo DiCaprio ah, isaga oo sii maraya xafladda Oscar ee soo socda.
Kharlamov ayaa fiidiyoow yar ku soo bandhigay bogiisa, halkaas oo xiddiga Hollywood uu ku hadlayo codkiisa. Sida laga soo xigtay Garik DiCaprio, iyada oo loo marayo helitaanka muuqaal caan ah, aktarku wuxuu bartey Ruushka:
Xusuusin munaasabadda abaalmarinta abaalmarinta Akadeemiyadda Mareykanka ee Filmka ayaa la qaban doonaa Febraayo 27, waxaana ugu muhiimsanaa su'aasha - Leonardo DiCaprio "Oscar" sannadka 2016?
Xenia Borodina mar kale waxay xirtaa dhar ay la gasho AliExpress
Weerar taxane ah "Major 3" oo si rasmi ah loo bilaabo
Olga Buzova ka dib markii uu daawaday agaasimaha "wiilasha Real" ayaa ku nasanaya dalka Turkiga
Khiyaano xun: shabakadu waxay heshay sawir ah Evgenia Feofilaktova, taas oo aysan jirin wax qumman
Yaa ka bedelaya Samoylova oo ka socda Eurovision 2017 oo ka socda Ruushka, waa wararkii ugu dambeeyay
Maxim Galkin si degdeg ah ayuu isbitaal u dhigey
Evelina Khromchenko ayaa kula taliyay "ciidamada geesinimada" inay shaqeeyaan
Casharada jimicsiga ee indhaha oo leh da '
Tartanka cagaarsho leh
Cocktail "Miro quraarad"
Waa maxay cunto macrobiotic ah?
Sida loo helo cunto
Keydso qaabka kadib dhammaadka cuntada
Muxuu ilmuhu u seexanayaa?
Ukuntu waa soo baxday
Ilmo aan lahayn aabe
Hadiyad ubadkayga hooyada Sannadka Cusub 2016: fikradaha ugu fiican ee sanadka cusub ee hadiyaddiisa
Haddii nin jecel yahay inuu jiido waqti
Horoscope for Janaayo 2018 - Haweeney Gemini - oo ka timid Tamara Globa iyo Angela Pearl
Timur Batrutdinov wuxuu helay gabadha ugu quruxda badan
Qaxwaha iyo Coconut Rux